Warri Maqaa Amaaraan Jibbinsa Facaasaa Jirtan Haammachuuf Qophaa! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWarri Maqaa Amaaraan Jibbinsa Facaasaa Jirtan Haammachuuf Qophaa!
Damee Boruu: Onkoloolessa 19, 2020
Impaayeera Itoophiyaa lammaffaa maqaa Amhaaraan deebisanii bituun abjuu dha. Kononeel Abiyii fi kitillaayyoota warri tahan ilmaan nafxanyoota tokko tokko dhugaa lafa irra jiru hubachuu dadhabanii abjiin daadhii dhugaa fi coomaa nyaachaa bulu. Guyyaan sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itoophiyaa gowwomsaanii yoo dides human cabsanii bitaan erga darbee waggaa soddomaa lakkaa’ee jira. Kana booda Itoophiyaan akka impaayeraati deebisanii ijaaruuf deebi’anii dhalachuu isaan barbaachisa. Namni deebi’ee dhalatu waan hin jirreef Impaayeerri Itoophiyaas deebitee hin ijaaramtu. Akka biyya tokkootti waliin jiraachuuf jaalala, wal qixxummaa fi fedhii walii tiksuun qofa ni danda’ama taha.
Bara kana gareen PP kan mootummaan irratti raawwate waan hojjechaa fi labsaa jiran baayyee nama yaadessa. Warri kun akka harree warraa garaa isaaniif qofa jiraatan waan taheef waan uummata tokkoof oogan fakkaatanii Impaayeera Itoophiyaa keessatti dhumaatii dhuma hin qabnee fiduu deemaa jiru. Waan maqaa jibbinsa Amhaaraan hammeenya facaasaa jiran guyyaan itti haammachuuf deeman fagoo hin jiru. Oromiyaa irratti waraana labsanii ilmaan Oromoo xiqqaa fi guddaa, jaarsaa fi jaartii, daa’imaa fi abbootii Amantuu utuu hin hafiin lafa irraa dugugaa jiru. Uummatni Oromoo lakkoobsaan waan danuu taheef Oromiyaa irraa haxa’amuu baduu dhiisuu danda’a taha. Warri lubbuun hafus haqa isaa falmachuu irraa hin dhaabbatu.
Damaqaa Mokonnon itti anaan Muumicha Ministraa darbee fi Abuna Maatiyoos Olaanaan amantaa Ortodoksii Amhaaran hidhachiisuuf labsiin godhan baayyee nama rifachiisa. Amhaarri duruu hidhatee jira. Uummata Amhaaraa irraa yaroon itti hidhanan hiikame beeku hin jiru. Sababni isaan irraa hin hikkanneef aadaa isaa ti jedhamee ti. Warra gowwaa akka saba keenya immoo hiikachiisuun akkuma kana aadaa nuuf tahee jira jechuu isaanii ti. Har’a PPn uummata keenya irraa shimalaa fi waan qara qabuu maraa irraa guraa jirti. Baayyee nama gadisiisa. Akkuma Isiyaas Afeworqii jedhe” Amhaara wajjin jiraachuu miti, waajjin kadhachunuu hin danda’amu” nama jechisiisa.
Ummatni Amhaaraa inni hidhatee jiru xiqqaatee PPn maqaa mootummaanii fi Abuuni isaan hidhachiisuuf ifatti labsuu waan aja’ibaa ti. Bara darbee daa’ima ilmaan Benshaangul fixxanii “ilmaan sanqalaa kana irraa bara dhaa’’ jedhanii nu yaadessuuf yaalanii turan. Yoo yaadoo qabanne illee karaa dandeenyuun of irraa facisuu malee harka laachaa hin jirru. Naannoo Benshaangul keessa uummata Bartaa, Gumuz, Komoo, Maa’oo, Agawoo fi Shanasha dabaltee Oromoo fi Amhaartu jiraata. Naannoo kanatti Amhaara hidhachiisuun sab-lammiiwwan xixiqqaa kana akka sanyii isaanii duguganii balleesanii lafaa fi qabeenyaa isaanii dhunfatan gochuuf yaadamee akka tahe mamiin jiraachuu hin qabu. Sab-lammiin naannoo kana jiraatan warra Oromoo tahan irraa kan hafe humna ittiin of irraa ittisan gahaa hin qaban. Kana malee lakkobsi isaan xiqqoo waan tahee lafa irra dugugamanii baduu danda’u. Haala kan hubannee namni dhugaa fi haqa ilma namaaf dhaabbanu hunduu warra hammeenya kana facaasaa jiran balaalefachuu fi abaaruu qabna. Uummata Benshangulii fi Uummata Oromoo wajjin dhaabbachuu fi gargaaruun dirqama tokko tokko sabaa fi sab-lammii Impaayeera Itoophiyaa akka tahe wal nama hin gaafachiisu.
Duulli isaan Benshaangul keessatti qopheessaa jiran tokko tokko saba fi sab-lammii Impaayeera Itoophiyaa keessa jiraniif yaroo isaa eegatee ni dhufa. Har’a yoo isaan gargaaruu dhifne ilaallee gaafa Oromiyaa fi Benshangul cabsanii bulaan gara warra hafee akka duulan mamii qabaachuu hin qabnu. Kanaafuu boru kan koo jennee har’a wal gargaarree ibida qabsiisaa jiran kana dhaamsuu qabna. Keessattu beektoni lammii Amhaaraa tahan maqaa sabaa isaaniin waan deemaa jiru kun add duraan Uummta Amhaaraa waan balaaf saaxilu waan taheef dura dhaabbachuu fi uummata isaanii barsiisu qabu.
Konooneel Abiyi fi namichi itti aanaa Mootummaa Amhaaraa duran tahee labsa Damaqaa Mokonnen akka fudhatanii fi akka hojii irraa oolu gochuuf walii galeera jedhanii jiru. Haalli kun baayyee nama rifachiisa. Sammuu maaliin akka yaadaa jiran naaf hin galu. Warri kun biyya kana maal gochuuf deemu? Biyyi maaliif taa’ee isaan ilaala? Warri akka ESAT garaa isaaniif jiraatan gaafaa Konooneel Abiyi horii dhabe ni badu. Biyya balleesanii baduu Waaqayyo nama haa oolshu. Biyyi baduu irraa namni faayidaa argatu hin jiru.
Namonni jeequmsa sammuu qaban warri akka Konoonel Abiyi seenaa darbe irraa barachuuf rakkina qabu. Seenaa warra abbaa irree(dictators) hunda yoo ilaalle humna waraana xiqqoo of dubaa waan qabaniif lubbuun isaanii bara barraa kan jiraatu itti fakkaata. Kana malee aangoo gad dhiisuun akka dadhabinsaa guddaa tahatti fudhatu. Garuu kan beekuu qaban lubbuu hiyyeessa karaa irra ciisu caalaa kan isaanitu yaadoo guddaa qaba. Hiyyeessi godoo isaa keessa bara Haayile Silaasee jalqaba amma har’a utuu namni tokko itti buune karaa irra jiraachaa jirra. Garuu warri aangoof gaggabee garaa guutachuuf utuu figuu kan salphatee dhume hedduu dha.
Yaaroo itti Mootummaan biyya aboomee bulchu hin jiretti, yaroo itti biyyi tasgabbii dhabee nagaan boora’aa jiru fi jeequmsaan liqifamee jiru kana keessa Saba Amhaaraa ni hidhachiifanna jedhanii dhaadachuun ammam akka Uummata Amhaaraaf bu’aa qabu naf hin galu. Yoo sabootaa impaayeera Itoophiyaa keessa jiran doorsisuu fi soodaachisaanii bituuf kan yaadanii fi yaalan tahee tooftaa duloomaa dha. Sabni isaan sodaatee bitamuuf tokko hin jiru. Karaa biraa akka Uummatni Amhaaraa saboota biraan shakkamuu fi irratti xiyyeefatamuu gochaa jiru. Silaa tooftaan isaanii hammeenya Minilki walaalan jaarra kudha sagalitti raawwate isaan immoo jaarraa digdamaffaa keessa haaromsuu dha.
Garuu warri hammeenyaa yaadan akka dura darbanii baduu danda’anis beeku qabu. Dhumaatii guddaa Impaayeera Itoophiyaa keessatti dhufaa jiruuf kan itti gaafatama duraa fudhatan: 1. Kononeel Abiyi Ahmed 2. Dammaqaa Mokonnon 3. Abuna Maatiyoos akka tahan Uummata Itoophiyaa duwwaa utuu hin taane biyyi lafaa beekuu qaba. Kana duraa yaroo mana amantaa keessa meeshaan waraanaa tulachaa jiru jedhamee odeessamu baayyeen keenya dhugaa tahuu isaa hin beeknu ture. Kunoo amma afaan Abuna Maatiyoos irraa waan dhageenyeef uummatni keenya of eeganna guddaa akka godhu hubachiisuu feena. Waan barbaadan yoo godhan qabsoo bilisummaa Uummata Oromoo kana boodaa of duuba deebisuun abjuu dha. Karaa amma deemaa jiran dhiisanii haqa Uummata Oromoo fudhatanii nagaan wajjin jiraachuuf yoo hojjetan isaanii wayya.
Maqaa ABOtin ibsaa kennuuf Bilxiginaan gantootaf mijeesite Guyyaa boruu jechuun Hagayya 10/2020 Ibsi miidiyaaleef Hilton…
Allaatti Nyaachuu Barbaadaan Maqaa Gogorrii jedhuun By Barroo Goobee, Adoolessaa 22, 2020 Mootummaan nafxanyaa kan…
The current Ethiopia’s reformed economic policy is defending Ethiopia’s national economic sovereignty. As a result in a short period of time the income of Ethiopians skyrocketed to this current amount of in average one thousand US dollars per year for each person. It might sound too good to be true but it is true, the numbers do not lie.
Ethiopia could have arrived to this stage decades ago if only the economic policies were reformed back then , even though it took too long, now we can finally say “YES WE HAD ARRIVED!!” .
From now on there is no going back The future keeps getting brighter and brighter each minute especially for all of those who got discipline in budgeting money .
prosperityuk.com › Articles
Defending National Economic Sovereignty – Prosperity
ከቦሌ መድሀኒአለም አከባቢ ሞል says:
We the middle aged and older aged Ethiopians must close our eyes and get fooled by PM Abiy Ahmed inorder to prevent a civil war. Otherwise if we the middle aged and older aged Ethiopians keep our eyes open and resist being fooled the young and the youth will surely engage in an endless civil war, that is why it is so important for all the middle aged and older aged Ethiopians to lead by example , we need to show the youth how to get fooled by keeping our eyes closed . If we failed to do that then the youth will for sure start an all out civil war with no quick end, since there will be no winner.